warkii.com » Liverpool Oo Kusoo Laabatay Jidka Guusha, Jones & Mane Oo Ceebtii City Ka Maydhay Klopp Iyo Aston Villa Oo Dhulka Sii Gashay
Liverpool Oo Kusoo Laabatay Jidka Guusha, Jones & Mane Oo Ceebtii City Ka Maydhay Klopp Iyo Aston Villa Oo Dhulka Sii Gashay
Liverpool ayaa kusoo laabatay jidka guusha, waxaanay 2-0 ku jiidheen Aston Villa oo ay ku martigeliyeen Anfield, kaddib guul-darradii xanuunka badnayd ee Man City ay Khamiistii ugu dhiibtay Etihad Stadium.
Laba gool oo qaybtii dambe ay dhaliyeen Sadio Mane iyo Jones ayaa Liverpool kusoo celiyey guusha, waxaanay rajo la’aan kusii rideen Aston Villa oo qarka u saaran inay horyaalka Premier League ka dhacdo oo ay u degto heerka labaad oo ay dhowaan kasoo baxday.
Daqiiqaddii 71aad ayuu Sadio Mane hoggaanka u dhiibay kooxdiisa, waxaana goolka labaad ciyaarta kusoo xidhay Jones daqiiqaddii 89aad.
Kaydka Harvey Elliott, Takumi Minamino, Curtis Jones, Jordan Henderson, Xherdan Shaqiri, Neco Williams, Roberto Firmino, Adrian, Georginio Wijnaldum.
Tababare Jurgen Klopp oo wali qalbigiisa ay kasii guuxayso guul-darradii bahdilka ahayd ee Manchester City ay u geysatay Khamiistii ayaa garoonka Anfield ku qaabilay kooxda dhibaatada ku dhex-jirta ee Aston Villa oo u baahnayd inay hesho guul ay sare ugaga soo bixi karto khadka cas.
Klopp waxa uu kulankan isbeddel ku sameeyey safkiisa, waxaanu kaydka dhigay Firmino, Henderson iyo Wijnaldum, si uu iskaga maydho canaantii ahayd inaanu fursad siinayn ciyaartoyda kaydka ku jira xataa iyadoo kooxdiisu horyaalka hanatay.
Ciyaarta ayaa ku bilaabantay isku awood sheegasho khadka dhexe ah oo ay ku hirdamayeen Naby Keita iyo Jack Grealish. Sidaas oo kale Chamberlain oo gool iska dhaliyey kulankii City ayaa u babbac-dhigayay ciyaartoyda ka ordaya inay heerka labaad ku noqdaan ee Aston Villa, waxaanay qaybtii hore oo dhan is-jiid-jiid iyo xafiiltan ku dhamaysteen labada kooxood iyagoon wax goolal ah iska dhalin.
Qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa noqotay mid ka fursado badan intii hore, waxaana gool inay dhaliso ku dhowaatay Aston Villa, markaas oo uu Grealish kubadda la dhex orday ciyaartoyda khadka dhexe ee Liverpool, waxaanu usii dhiibay El Ghazi oo dhinaca midig joogay, kaas oo isaguna hore ula soo dhaqaaqay oo usoo dhowaaday goolka Liverpool, ka hor intii aanu toogasho samaynin ee aanu Alisson ku qasbin inuu badbaado wanaagsan sameeyo.
Klopp oo arkay in kooxdiisu firfircoonaysiin u baahan tahay ayaa hal mar soo wada geliyey Firmino, Henderson iyo Wijnaldum, waxaanay taasi keentay inay goolka koowaad la yimaaddaan daqiiqaddii 71aad, waxaana dhaliyey Sadio Mane oo kubbad ka helay Naby Keita.
Da’yarka Jones ayuu Klopp mar kale soo geliyey, waxaanu laacibkan yar ee mustaqbalka weyn leh hoggaanka usii dheereeyey kooxdiisa, isaga oo dhaliyey goolka labaad, kaas oo uu shabaqa taabsiiyey markii uu kubadda usoo dhiibay Mohamed Salah.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 2-0 ay guushu ku raacday Liverpool oo hoggaanka horyaalka ku qabatay 23 dhibcood, laakiin Manchester City ayaa kusoo celin karta farqiga 20 dhibcood haddii ay ka adkaato Southampton.